အစားအသောက်ဒိုင်ယာရီ app ကို android ဖုန်းများအတွက် Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အစားအသောက်ဒိုင်ယာရီ
အစားအသောက်ဒိုင်ယာရီ APK ကို
အစားအသောက်ဒိုင်ယာရီပဲပုံမှန်ကယ်လိုရီကောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အစားအသောက်ဒိုင်ယာရီထိန်းချုပ်မှု၌သငျထားဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှသုံးစွဲဖို့အဖြစ်လွယ်ကူသောမြန်ဆန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်သည်။ ဒုစရိုက်ဖြေခရီးစဉ်, ဒါမှမဟုတ်အဆက်မပြတ်ချင်နေကြတဲ့သတိပေးချက်များ, ဒါပေမယ့်ဖြောင့်ရှေ့ကိုနှင့်သင့်အသုံးအနှုန်းများအပေါ်မရှိပါ။
ဒီ app ကိုသင်ကိုယ်အလေးချိန်ကူညီပေးသည်, အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းရန်, ဒါမှမဟုတ်ကယ်လိုရီရေတွက်မှတဆင့်အလေးချိန်ရရှိပေမယ့်လည်း (ဥပမာစသည်တို့ကိုဆီးချို, ဟာ Celiac နှင့်အတူလူများအတွက်) နှင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ဘို့တိကျတဲ့အစာအာဟာရအမှတ်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
app ကို about:
ဒီ app ကသင့်တဲ့အစားအစာကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်သင်အစာစားသောအရာကိုခြေရာခံဖို့ကလွယ်ကူအောင်အသုံးပြုပုံကျန်းမာသန်စွမ်းကိုစားကူညီပေးသည်။ အဆိုပါဒီဇိုင်း 1 ကလစ် entry ကိုအတူတတ်နိုင်သမျှအမြန် entry ကိုအောင် optimized နှင့်မကြာသေးမီကအစားအစာအကြံပြုချက်များသည်။ အဆိုပါဒေတာဘေ့စ built-in ပြီးသားအစားအစာပစ္စည်းများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပြီးဥစ္စာသူတို့ကိုထည့်သွင်းလွယ်ကူသည်, မသိလျှင်။
1 ။ တစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီးအစွမ်းထက်ဒီဇိုင်း: သင်တို့ကိုအများဆုံးအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်ကားအဘယ်သို့သောကွောငျ့ဒီ app, လတ်တလောမုန့်ညက်ရက်နေ့တွင်, entry ကို screen ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါဒီဇိုင်းကိုတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိအဖြစ် entries တွေကိုထည့်သွင်းစေသည်။
2 ။ စိတ်ကြိုက်အကြံပြုချက်များနှင့်တသားတကိုထိပုတ်ပါ entry ကို: အဆိုပါအသုံးအများဆုံးအစားအသောက်ပစ္စည်းများကိုချက်ချင်းမရွေးနိုင်ပါတယ်။ သင်မကြာခဏအတူတူအစာကိုစားစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဒုတိယနေ့၌စတင်ခြင်း, သင့်မကြာသေးမီပစ္စည်းများအကြံပြုကြသည်။
3 ။ အတွက် logging မလိုအပ်: အဘယ်သူမျှမကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်လိုအပ်ပါသည်။
4 ။ အဆိုပါဒေတာဘေ့စရှိနှင့်ပြီးသားပစ္စည်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏: အများစုမှာအစားအသောက်ပစ္စည်းများဘုံအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အရွယ်အစား, ကယ်လိုရီ, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, ပရိုတိန်းနှင့်အဆီနှင့် ပတ်သက်. တိကျမှန်ကန်သတင်းအချက်အလက်ရှိသည်။
5 ။ အပြည့်အဝ Off-line ကိုထောက်ခံမှု: အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခံရဖို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါဘူး။
6 ။ တိကျသော entry ကိုလည်းလွယ်ကူသည်: သင်တိကျစွာတစ် slider ကို အသုံးပြု. တိကျသောပမာဏကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
7 ။ နေ့စဉ်အစီရင်ခံစာများ: မီနူးကိုသုံးပြီး, သင်တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ၏အကျဉ်းချုပ်ပြသသောထိုဒိုင်ယာရီကိုဖွင့်နိုင်ပါ။ ဒီနေရာတွင်နည်းနည်းတြိဂံအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကယ်လိုရီ, ပရိုတိန်းနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
8 ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတိပေးချက်များကိုသင်ပစ်မှတ်အပေါ်နေဖို့ကူညီပေးပါ: သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီစားပြီးနောက်, ဒါမှမဟုတ်နေ့ကိုရဲ့အဆုံးမှာ, သေချာသင်သည်သင်၏ဒိုင်ယာရီထုတ်ဖြည့်ပါစေတစ်ဦးအဆင်ပြေနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒါဟာဒေတာဘေ့စအတွက်သတင်းအချက်အလက်များအားအတည်ပြုရန်သင့်အစားအစာထုပ်ပိုးပေါ်သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်၏ အစားအစာကိုအစာအာဟာရအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူနှင့်အချိန်ကျော် fluctuates ။
1 ။ အဘယ်သူမျှမကပိုကြော်ငြာ။
2 ။ တစ်ဦးကအများကြီးပိုကြီးတဲ့အစားအစာကိုဒေတာဘေ့စ။
3 ။ ကိုယ်ဒိုင်ယာရီ၏ကော်ပီ email ပို့နိုင်စွမ်း။
4 ။ တစ်ရက်သီးခြားအစားအစာများ 8 အထိဝင်နိုင်စွမ်းအပါအဝင်ပိုများသော configuration options ကို။
သင်ကသုံးပြီးခစျြလိမျ့မညျဘာလို့လဲဆိုတော့ယခု download လုပ်ပါ။
ယခုသင်အလိုအလျှောက် backup လုပ်ထားဘို့အတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီး, မျိုးစုံကိရိယာများပေါ်တွင်သုံးနိုငျ
42.06 ကို MB
ထိပ်တန်း5အစားအသောက် Tracker Apps ကပ
စားနပ်ရိက္ခာလမ်း - ...